> Resource > YouTube > 3 Siyaabaha geliyaan Video inay YouTube
Wax kasta oo aad qabto badan oo video files kombiyuutarka, ama aad rabtid in aad u gaar ah videos si ay ula wadaagaan, YouTube waa meel wanaagsan oo waa in aad u tagto. Iyadoo uploading video in YouTube waa hab fudud oo dadka isticmaala badan, ma ahan wax sahlan bilowga ah. Ka sokow, waxaa kale oo jira siyaabo kale oo loo video geliyaan si ay u YouTube. Maqaalkani waxa uu soo bandhigi doonaa 3 siyaabood oo loo dhigay videos on YouTube , oo daboolaya bilowga ah iyo amateurs.
Upload Video inay YouTube ka Computer
Sida ugu joogto ah si video geliyaan in YouTube waa ka web browser. Bogagga internetka ee YouTube, in aad sidoo kale geliyaan yaabaa file video on your folder deegaanka, ama u qoraan video cusub haddii aad computer qoreysa webcam ah. Hoos waxaa ku gaarka ah:
1. Booqo YouTube.com iyo diiwaan xisaab lacag la'aan ah haddii aadan weli. Marka aad qortey, aad magacaaga account YouTube arki doonaa kooxda ugu sareeya.
2. Riix badhanka Upload in la furo bog cusub.
3. Waxaad heli doontaa labo ikhtiyaar: " Upload files badan "ka computer ama" Record ka webcam "si fikradaada. Si laguugu sahlo, miyaanay idiin jiidin karo oo hoos u videos bogga inuu ku soo bilowdo inaad koombiyuutarka. Haddii kale, waxaad dooran doonaa files ee computer ka file browser pop-up ah.
4. Marka aad dooratay video ah, oo aad arki doonaa sida ay horumarka iyo sidoo kale fursadaha kale sida horyaalka, sharaxaad, tags, gaarka ah, liisanka, iwm Iyadoo koombiyuutarka la socday, waad ku dari karaysaa videos dheeraad ah adigoo gujinaya "Add more videos "button. Waxaad gali yaabaa badan videos in YouTube waqti isku mid ah.
5. Riix si loo badbaadiyo fursado bedelay oo ha la xidho page Upload ilaa video ah ayaa ku dhameysatay kaalinta koombiyuutarka.
6. Marka habka Upload la dhammeeyo, inta ay kukacayaan qaar ka mid ah waqtigii YouTube si ay u diyaariyaan video ka hor soo bandhiga dadweynaha.
7. mar walba Waxaad aadi kartaa "My Videos" page in xaalkaa info video ah, u arkaan tirakoobka gaadiidka, ku dar annotation ama qoraalka, iyo wixii la mid ah.
8. tag bogga video ah si aad ula wadaagto videos iyo u arkaan comments ka dadka kale.
Video ku samee oo si toos ah u geliyaan in YouTube
Wondershare DVD Muqaal dhise kuu ogolaanaya in aad si fudud u samayn videos ka sawir, video clip, music iyo subtitles. Markaas si toos ah u geliyaan in aad xisaabta YouTube barnaamijka. Ka sokow samaynta YouTube videos, waxa kale oo aad u tidicdo kartaa sawiro iyo videos in DVD slideshow u ciyaaro filimada qurux on TV.
Upload Video inay YouTube ka Mobile Phones
Maalmahan, telefoonnada gacanta, gaar ahaan iPhone, waa awood ku filan si ay u qoraan tayada wanaagsan ee video for sharing. YouTube waa goobta ku haboon inuu la telefoonka mobile wadaagno qabsado-iyo-biqil video. Bogga Upload ee YouTube, waxaa jira xiriir ka Upload Mobile Direct in ay siin cinwaan email ah si ay u geliyaan videos in YouTube. Waxaad gali kartaa videos phone in YouTube by fariin cinwaanka email siiyo diraya. Halkan waxaa ku qoran talooyin geliyaan videos in YouTube ka telefoonada gacanta.
1. Booqo Direct Mobile Uploads si ay u helaan cinwaanka email bartilmaameedka.
2. Marka halabuurka fariinta, ku soo lifaaq aad video (oggol yahay oo keliya hal video file) iyo qori ah Subject (isticmaalo sida YouTube video horyaalka) iyo Body (isticmaalo sida YouTube sharaxaad video) ka hor inta kugu dhuftay button diro.
3. Waxaad u baahan tahay 3G ama WiFi ah, iyo in la hubiyo size video iyo dhererka ha ku xadgudhina YouTube video.
4. Haddii aad leedahay size weyn video inay geliyaan si ay u YouTube, waxa lagugula talinayaa si ay u gudbiyaan video ay u computer iyo email waxaa soo diro. Large size file video ku kici doona waqti badan si aad u geliyaan in YouTube via email ka telefoonka gacanta. Plus, u isticmaali doonaa badan oo kootada xogta adiga iyo laga yaabee in aad ku kacaysaa lacag badan.
5. Waxaad tagtaa "My Videos" in la beddelo doorasho ka badan sida tags, liisanka, gaarka ah, iwm isticmaalaya magacaaga account YouTube iyo password.